Prof. Jawaari oo raba inuu isku xiro baarlamaanada Soomaaliya iyo Jarmalka (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 4 March 2015 4 March 2015
Mareeg.com: Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo arrimo caafimaad u aaday Jarmalka, ayna la socdeen xubno uu ka mid yahay ku xigeenkiisa 2-aad, Mahad Cabdalla Cawad ayaa maanta ku tagay booqasho taariikhi ah xarunta baarlamanka Jarmalka, halkaasoo ay kulammo kula qaateen guddoonka baarlamaanka Jarmalka.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha l socday ayaa kula kulan la qaatay gudoonka baarlamaanka dalka jarmalka, waxaana kulanka looga wadahadlay sidii xiriir adag iyo iskaashi ay u yeelan lahaayeen baarlamaannada Soomaaliya iyo Jarmalka.
Prof. Jawaari ayaa si gaar ah kulan ula qaatay guddiga baarlamaanka Jarmalka u qaabilsan arrimaha bariga Afrika oo ka kooban 36 xildhibaan, iyadoo goobta ka ballanqaaday inay dhisayaan guddi wadajir ah oo ka shaqeeya xiriirka iyo wada shaqeynta labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Jarmalka.
Sidoo kale, wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxa xafiiska arrimaha dibadda ee Afrika, iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa taageerrada iyo iskaashiga Soomaalia iyo Jarmalka oo iyagu horay u lahaan jiray xiriir taariikhi ah.
Prof. Jawaari ayaa dalka Jarmalka bishii lasoo dhaafay ugu sodaalay arrimo caafimaad, hase ahaatee wuxuu safarkiisa uga faa’iideystay inuu xiriir u sameeyo baarlamaanada Soomaaliya iyo Jarmalka.
DUQA HALOO SHEEGO: MAQAAL